Nagu saabsan - Xiying (Fujian) Dharka & Dharka Co., Ltd.
Saraawiisha Casriga ah
XIYINGYING (FUJIAN) DIRISKA & WEAVING Co., Ltd.waxaa la aasaasay 2005 ， kaas oo lagu soo saaray aasaaska Shishi XiYangYang Carruurta Dharka Co., Ltd. oo la aasaasay 1998. Ka dib in ka badan 20 sano oo horumar ah, waxaan nahay xirfadlayaal ku takhasusay dharka iyo dharka Carruurta iyo dharka. naqshadeynta wax soo saarka, soo saarista & suuqgeynta. Kuweenawax soo saarka sanadlaha ah waa in ka badan 4 milyan oo gogo '/ set. Waxaan ka gudubnay Shahaadada Nidaamka Maareynta Tayada ee ISO9001, Shahaadada Nidaamka Mas'uuliyadda Bulshada ee SA8000 iyo Isku-darka Shahaadada Nidaamka Maareynta Macluumaadka iyo Warshadaha, oo waxaan ku guuleysannay abaalmarinno: "U hoggaansanaanta Qandaraaska iyo Qeybta Lagu Kalsoonaan karo" ee Gobolka Fujian "Fujian Waxyaalaha ugu Saraysa" 、 “ Astaanka caanka ah ee Fujian ”iyo wixii la mid ah. Xafiiskayagu wuxuu ku yaalaa mid ka mid ah saldhigyada waaweyn ee wax soo saarka dharka - SHISHI City, oo leh dhaqaale barwaaqo leh iyo taraafikada ku habboon. Waxaan haynaa in kabadan 400 oo shaqaale ah oo leh warshadeena heerka caadiga ah iyo koox xirfadlayaal R&D ah.
Tan iyo markii la aasaasay, waxaan ku adkaysaneynaa fikradda maareynta horumarsan, tayada wax soo saarka aad u fiican iyo hagitaanka shirkadda iyadoo la adeegsanayo fikradda suuqa. Isla mar ahaantaana, waxaan fiiro gaar ah u leenahay qaababka cusub ee horumarinta, raac si adag u xakameynta tayada. Waxaa si qoto dheer u doorbiday macaamiisha cusub iyo kuwa duugga ah inaan siinno tayada heerka koowaad, qiimaha la kala doorbido, keenista waqtiga iyo adeegga tixgelinta iwm. Badeecadeenu waxaa loogu talo galay suuqyada heerka dhexe iyo kuwa sare, oo adduunka si fiican uga iibiya, sida Talyaaniga, Isbaanish, Griig, Baraasiil, Filibiin, UAE, Algeria iyo wixii la mid ah
Fikraddeena ganacsi waa in la abuuro soojiidashada isla markaana wadajirka guusha wada-noolaanshaha iskaashi la wadaago.
XIYINGYING wuxuu furayaa qalbigiisa, wuxuu si kal iyo laab ah u soo dhaweynayaa macaamiisha cusub iyo kuwii hore inay soo booqdaan, waxaan noqon doonaa xulashadaada ugufiican iyo waliba lamaanahaaga ugu kalsoonida badan.
Naqshadeynta & Horumarinta
Kooxdayada wanaagsan ee R & D waxay si isdaba-joog ah u cusbooneysiiyaan si ay ula kulmaan shuruudaha macaamiisha.
Soosaarka & Dhoofinta
Kooxdayada wax soo saar waxay siisaa alaabada dharka heerar tayo sare leh, sifiican ayey adduunka uga iibiyaan.
Waxaan haynaa nidaamka adeegga ee saxda ah, haddii ay tahay iibinta ka hor ama ka dib iibka, waxaan ku siin doonnaa adeegga ugu fiican.
MAYA.E5 DHISMAHA, DHARKA XARUNTA FARSADA, MAGAALADA LINGXIU, MAGAALADA SHISHI, MAGAALADA QUANZHOU, Gobolka FUJIAN
Si diiran u soo dhawow si aad u booqato Canton-keena 127-aad ...
Horudhaca 127-aad online Canton Fair
Mawduuca Naqshadeynta SS21: Culeyska Kabaha Gaagaaban
Iswaafajinta moodada iyo jimicsiga ...